ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းကို ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတဲ့ Megan Leavey နဲ့သူမရဲ့ ခွေးလေးအကြောင်း – Trend.com.mm
ဒီတစ်ခါတော့ ပရိသတ်တွေအတွက် ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကိုပြန်ရိုက်ထားတဲ့ ဒရာမာဇာတ်ကားတစ်ကားနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ရုပ်ရှင်ကားနာမည်ကတော့ Megan Leavey ပါ။ဒီဇာတ်လမ်းဟာ ၂၀၁၇တုန်းကရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပြီး ယူအက်စ်မရိန်း တပ်သားတစ်ယောက်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ မိန်းကလေး Megan Leavey နဲ့ စစ်တပ်တာဝန်ကိုအတူထမ်းဆောင်တဲ့ခွေးလေး Rex တို့ရဲ့  အကြောင်းကိုအဓိကထားပြီး ရိုက်ကူးထားတဲ့ဒရာမာဇာတ်လမ်းဖြစ်သလို ဖြစ်ရပ်မှန်သမိုင်းကြောင်း ကိုအခြေခံပြီးရိုက်ကူးထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Megan Leavey အဖြစ်အဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသူကတော့ Kate Mara ဖြစ်ပြီး Tom Felton ၊ Edie Falco ၊ Ramon Rodriguez ၊ Bradley Whitford တို့က အဓိကပါဝင်အားဖြည့်ထားပါတယ်။တကယ်လက်တွေ့ဘ၀ Megan Leavey ဟာတော့ ၁၉၈၃ခုနှစ်၊အောက်တိုဘာ ၂၈ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ယူအက်စ်မရိန်းစစ်တပ်မှာ ခွေးလေးနဲ့အတူ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းပုံစံလေးကတော့ ဘာအလုပ်နဲ့မှအဆင်တပြေမရှိသလို မိသားစုနဲ့လည်းအဆင်မပြေတဲ့ Megan Leavey ဟာ မရိန်းစစ်တပ်ထဲကိုရောက်ခဲ့ပြီး တာဝန်မှာလည်းထူးချွန်တဲ့ တပ်သားတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက် သူမဟာ စစ်တပ်ကဗုံးရှာဖွေတဲ့ခွေးလေး Rex နဲ့အတူ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့်ရအောင်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ပထမတော့ ခွေးလေးနဲ့ရင်းနှီးမှုမရခဲ့ပေမဲ့
နောက်ပိုင်းမှာအဆင်ပြေသွားခဲ့ပြီးအီရတ်ကိုတာဝန်နဲ့ထွက်ခွာလာခဲ့ပါတယ်။အီရတ်မြို့နှစ်မြို့ကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီး ရန်သူတွေထောင်ထားတဲ့ဗုံးကိုရှာဖွေခဲ့ပေမဲ့ မထင်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာMegan ရော ခွေးလေး Rex ပါ ဗုံးမိပြီး ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ကြပါတယ်။ ဒဏ်ရာကြောင့် ခဏအနားယူခဲ့ရတဲ့ အချိန်မှာတော့ Megan တစ်ယောက်ဘယ်လိုတွေပြောင်းလဲသွားမလဲ? ခွေးလေးကိုသိပ်ချစ်တဲ့ Megan စစ်တပ်ထဲပြန်ရောက်တဲ့အခါ..ဘယ်လိုအပြောင်းအလဲတွေကြုံရမလဲ?
နောက်ပိုင်းဇာတ်လမ်းကတော့ ခွေးလေးနဲ့ Megan ကြားက ကြီးမားတဲ့သံယောဇဉ်တွေ၊ မထင်မှတ်ထားတဲ့အပြောင်းအလဲတွေနဲ့ ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာသိချင်စိတ်ပြင်းပြအောင် ပရိသတ်တွေကိုဆွဲဆောင်ထားနိုင်တဲ့ဒရာမာအချိုးအချိတ်တွေနဲ့ စီစဉ်ရိုက်ကူးထား တာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့် ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းဖြစ်တာကြောင့် နောက်ဆုံးဘာဖြစ်မလဲ ဆိုတာကိုပရိသတ်တွေက ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားကြပါတယ်။သင်သာ ဒီကားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် ခွေးလေးတွေရဲ့ သံယောဇဉ်တွေ၊အပြုအမူတွေကို အရင်ကထက်ပိုနားလည်ခံစားတတ်သွားပြီး နှလုံးသားကလည်းပိုပြီးနူးညံ့လာမယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်။
ဒီတဈခါတော့ ပရိသတျတှအေတှကျ ဖွဈရပျမှနျဇာတျလမျးတဈပုဒျကိုပွနျရိုကျထားတဲ့ ဒရာမာဇာတျကားတဈကားနဲ့မိတျဆကျပေးခငျြပါတယျ။ရုပျရှငျကားနာမညျကတော့ Megan Leavey ပါ။ဒီဇာတျလမျးဟာ ၂၀၁ရတုနျးကရိုကျကူးခဲ့တာဖွဈပွီး ယူအကျဈမရိနျး တပျသားတဈယောကျအဖွဈ တာဝနျထမျးဆောငျခဲ့တဲ့ မိနျးကလေး Megan Leavey နဲ့ စဈတပျတာဝနျကိုအတူထမျးဆောငျတဲ့ခှေးလေး Rex တို့ရဲ့အကွောငျးကိုအဓိကထားပွီး ရိုကျကူးထားတဲ့ဒရာမာဇာတျလမျးဖွဈသလို ဖွဈရပျမှနျသမိုငျးကွောငျး ကိုအခွခေံပွီးရိုကျကူးထားတာလညျးဖွဈပါတယျ။
Megan Leavey အဖွဈအဓိကပါဝငျသရုပျဆောငျထားသူကတော့ Kate Mara ဖွဈပွီး Tom Felton ၊ Edie Falco ၊ Ramon Rodriguez ၊ Bradley Whitford တို့က အဓိကပါဝငျအားဖွညျ့ထားပါတယျ။တကယျလကျတှဘေ့ဝ Megan Leavey ဟာတော့ ၁၉၈၃ခုနှဈ၊အောကျတိုဘာ ၂၈ရကျနမှေ့ာမှေးဖှားခဲ့တာဖွဈပွီး ယူအကျဈမရိနျးစဈတပျမှာ ခှေးလေးနဲ့အတူ တာဝနျထမျးဆောငျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ဇာတျလမျးပုံစံလေးကတော့ ဘာအလုပျနဲ့မှအဆငျတပွမေရှိသလို မိသားစုနဲ့လညျးအဆငျမပွတေဲ့ Megan Leavey ဟာ မရိနျးစဈတပျထဲကိုရောကျခဲ့ပွီး တာဝနျမှာလညျးထူးခြှနျတဲ့ တပျသားတဈယောကျဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။အဲ့ဒီနောကျသူမဟာ စဈတပျက ဗုံးရှာဖှတေဲ့ခှေးလေး Rex နဲ့အတူ တာဝနျထမျးဆောငျခှငျ့ရအောငျကွိုးစားခဲ့ပါတယျ။ပထမတော့ခှေးလေးနဲ့ရငျးနှီးမှုမရခဲ့ပမေဲ့
နောကျပိုငျးမှာအဆငျပွသှေားခဲ့ပွီးအီရတျကိုတာဝနျနဲ့ထှကျခှာလာခဲ့ပါတယျ။အီရတျမွို့နှဈမွို့ကိုရောကျရှိခဲ့ပွီး ရနျသူတှထေောငျထားတဲ့ဗုံးကို ခှေးလေးနဲ့အတူ ရှာဖှခေဲ့ပမေဲ့ မထငျမှတျထားတဲ့အခြိနျမှာ Megan ရော ခှေးလေး Rex ပါ ဗုံးမိပွီး ဒဏျရာတှရေရှိခဲ့ကွပါတယျ။ ဒဏျရာကွောငျ့ခဏ အနားယူခဲ့ရတဲ့အခြိနျမှာတော့ Megan တဈယောကျဘယျလိုတှပွေောငျးလဲသှားမလဲ? ခှေးလေးကိုသိပျခဈြတဲ့ Megan စဈတပျထဲပွနျရောကျတဲ့အခါ… ဘယျလိုအပွောငျးအလဲတှကွေုံရမလဲ?
နောကျပိုငျးဇာတျလမျးကတော့ ခှေးလေးနဲ့ Megan ကွားက ကွီးမားတဲ့သံယောဇဉျတှေ၊ မထငျမှတျထားတဲ့အပွောငျးအလဲတှနေဲ့ ဘာတှဆေကျဖွဈမလဲဆိုတာသိခငျြစိတျပွငျးပွအောငျ ပရိသတျတှကေိုဆှဲဆောငျထားနိုငျတဲ့ဒရာမာအခြိုးအခြိတျတှနေဲ့ စီစဉျရိုကျကူးထား တာဖွဈပါတယျ။အထူးသဖွငျ့ ဖွဈရပျမှနျဇာတျလမျးဖွဈတာကွောငျ့ နောကျဆုံးဘာဖွဈမလဲ ဆိုတာကိုပရိသတျတှကေ ပိုပွီးစိတျဝငျစားကွပါတယျ။သငျသာ ဒီကားကိုကွညျ့မယျဆိုရငျ ခှေးလေးတှရေဲ့ သံယောဇဉျတှေ၊အပွုအမူတှကေို အရငျကထကျပိုနားလညျခံစားတတျသှားပွီး နှလုံးသားကလညျးပိုပွီးနူးညံ့လာမယျဆိုတာ သခြောပါတယျ။